Genomic DNA kuburitsa, plasmid DNA kuburitsa, uye nucleic acid kuburitsa uye kuchenesa kwemaenzaniso akasiyana. Yakakwira-kuburitsa otomatiki emvura oparesheni kuti uwane kuita kwepamusoro-kuburitsa mashandiro, senge mapuroteni kunaya, kudhonza kwemvura, uye kugadzirisa kwemhuka dzemhuka, mabhakitiriya, zvirimwa, ivhu, makiriniki sampuro, mbiriso, nezvimwe.
1.Iyo yakadzika tsime ndiro yakagadzirwa ne polypropylene, chinhu che polymer chine yakanaka chemakemikari inoenderana. Iyo inogona kushandiswa mukuchengetedza kweakawanda polar organic mhinduro, acid uye alkaline mhinduro murabhoritari.
2.High tembiricha uye yakanyanya kumanikidza sterilization, inogona kukomberedzwa kuchengetedza nzvimbo. Iyo ndiro yose haina bubble, hapana mutsetse, hapana leakage phenomenon. Gamma-ray sterilization uye isiri-sterization inosarudzika.
3.Hapana DNA neRNA enzymes, hapana kupisa kunobva. Tevera SBS / ANSI zviyero zvemazhinji-chiteshi mapipettes uye otomatiki mashopu.
4.High mhando polypropylene zvinhu, Single kupisa chisimbiso, hombe kana rakazara mumitsara kubudikidza mhoni tireyi, Small kukura, nyore kuchengeta
5.Sample yekuchengetera: inogona kutsiva yakajairwa 1.5ml centrifuge chubhu yekuchengetedza masampuli, uye inogona kurongedzwa zvakaringana kuchengetedza nzvimbo, iine hukuru hwekuchengetedza, uye inogona kumira -80, firiji mamiriro. Naizvozvo, inonzi zvakare ndiro yekuchengetedza.
6.Sample kugadzira: inogona kushandiswa mukubatanidzwa nemapassasset akawanda, yakakwira-kuburitsa otomatiki emvura maprosesa uye akasiyana softwares kubvumidza yakakwira-kuburitsa mashandiro eemaopy sampuli, semuenzaniso, mapuroteni mvura Yakanyanya kuvandudza kushanda kwemuenzaniso kugadzirisa. Inogona kumira yakanyanya tembiricha
7.Board hapana bubble, hapana mitsetse, hapana spills, yakakwira michini simba, yakasimba bond department;
8.Accomodate kunyange hombe yekushanda mavhoriyamu, anosvika 1.2 mL kana 2.2 mL yekuchengetera vhoriyamu patsime;
Mapuroteni neDNA hazvinganamatira kuPP, zvichibvumidza kuzadzikiswa kwemuenzaniso kwakakwana.
Ruvara rwechisikigo runoita kuti zvive nyore kuwana iyo notch dhizaini. Shandisa: Inoshanda kune inozivisa system, HTS, master sampling
uye sampuro, yemuchina sampling uye otomatiki akatamisa fluid system
10.96 Yakadzika Well Plates inogona kushandiswa mukukura kwehutachiona tsika kana kuchengetwa kwemakomponi.
Pyramid-pasi inorerutsa kudzokororwa kwesampuro uye inovandudza kusanganisa mukati mezvakanaka nekugadzira iyo sloshing mhedzisiro kwete vortex
11.when yakagumbuka, polypropylene kuvaka inopa yakaderera inosunga pamusoro kudzivirira masampuli kubva kunamatira kumadziro emadziro.
AIHWA. Tsananguro Zvakanaka Vhoriyamu Chimiro Pazasi Kurongedza / Ctns Mbereko
PC0016 Yakadzika tsime Plate 96 2.2ml Square U 50 Inesarudzo
PC0017 Yakadzika tsime Plate 96 2.2ml Square U 50 Inesarudzo
PC0018 Yakadzika tsime Plate 96 2.2ml Square V 50 Inesarudzo
PC0053 6 ubvise chubhu 6 2.2ml Square U 1500 Inesarudzo
PC0053F Plate (pani) Rack 2.2ml / / 168 Inesarudzo
PC1064 Yakadzika tsime Plate 96 2.0ml Square U 50 Inesarudzo
PC0073 Elution ndiro 96 0.5ml Square V 100 Inesarudzo
PC0076 8 bvisa chubhu 8 2.2ml Square V 1500 Inesarudzo
PC0076F Plate (pani) Rack 2.2ml / / 168 Inesarudzo
PC0084 Yakadzika tsime Plate 96 2.2ml Square U 50 Inesarudzo
PC0085 Yakadzika tsime Plate 96 1.6ml Square V 80 Inesarudzo
Pashure: PCR ndiro
Zvadaro: Strip-tsvimbo Comb
PC0016 2.2ml 96 yakadzika tsime ndiro U pasi
PC0017 2.2ml 96 yakadzika tsime ndiro V pasi
PC0018 2.2ml 96 yakadzika tsime ndiro U pasi
PC0053 6 kubvarura chubhu
PC0076 8 inobvisa chubhu V pasi
PC0084 2.2ml 96 yakadzika tsime ndiro isina siketi
PC0085 1.6ml 96 yakadzika tsime ndiro V pasi
PC1064 2.0ml 96 yakadzika tsime ndiro U pasi